Phakamisa izindiza zezindiza ze-Preparator 3D v4?
Umbuzo Phakamisa izindiza zezindiza ze-Preparator 3D v4?
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1334 by richb
Sawubona, ngabe P3D i-v4 izinyanga ezimbalwa futhi ibilokhu ifuna ama-Douglas propliners azosebenza ku-v4. Ngine-c47 / DC3. Ungabi nenhlanhla ngamaDC4 / 6or 7s akwazi ukusebenza. Ngingathanda ukuba nama-DC-6Bs azosebenza ku-v4!